हातका यी ७ रेखा हेरेर आफैं चिनौ आफ्नो भाग्य::Aalap Studio
हातका यी ७ रेखा हेरेर आफैं चिनौ आफ्नो भाग्य
अक्सर धेरै मानिसहरु आफ्नो हातको रेखाहरु हेरेर यो सोच्ने गर्छन कि – मेरो भाग्य कस्तो छ ? तर धेरै मानिसलाई हस्तरेखाको बारेमा जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैले त आफ्नो भाग्य जान्न ज्योतिषीलाई भेट्ने गर्छन् तर हातका केही रेखाका बारेमा जानकारी लिएमा ज्योतिषीलाई भेटिरहनु पर्ने छैन । यसर्थ यी ७ रेखाबारे जानकारी लिएर आफ्नो भाग्य आफैंले पत्ता लगाउनुहोस् :
१. जीवन रेखा जीवन रेखा हातको सबैभन्दा महत्वपूर्ण रेखा हो । जसमा जिन्दगीमा हुने मुख्य घटनाहरुको रहस्य देखिन्छ । यदी तपाईंको यो रेखा गहिरो र लामो भए तपाईंको स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । उहीँ अर्काे लाइनमा रेखा पातलो र छोटो भए केही शारीरिक दुःखले तपाईंको उमेरभर घेरिएको हुन्छ ।
२. हृदय रेखा हृदय रेखाबाट प्रेम र सम्बन्धका बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ । यो रेखाबाट मानिस भावुक छ या छैन भन्ने पनि जान्न सकिन्छ । हातमा सीधा र छोटो हृदय रेखा हुनुको अर्थ हुन्छ– शब्दले भन्दा बढी कामले धेरै माया देखाउँछन् ।
३. मस्तिष्क रेखा मस्तिष्क रेखाबाट व्यक्तिको ज्ञान र विवेकको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ । साथै मनोविज्ञानबारे पनि थाहा पाउन सकिन्छ । तपाईंको यो रेखा छोटो भए जीवनको कुनै पनि फैसलासजिलै लिन सक्नुहुन्छ । यदी यो रेखा लामो भएका मानिसकरु कुनै पनि निर्णय लिँदा गहिराइसम्म बुझेर मात्रै लिने गर्छन । साथै लामो रेखा हुने मानिसहरु रचानात्मक सोच राख्छन् ।
४. भाग्य रेखा रेखाको नाम नै भाग्य रेखा भएकाले थाहा पाउनु भएको कि यो महत्वपूर्ण रेखा हो । यो रेखा छिनेको या मधुरो भए भाग्य बुलन्द अर्थात राम्रो छैन । जीवन संघर्षमय र तनाव पूर्ण रहनेछ । यदी यो रेखा औंलाबाट सुरु भएर जीवन रेखालाई छोए तपाईंको परिवार तथा साथीको जीवन सुखमय हुनेछ ।
५. सूर्य रेखा यो रेखाबारे धेरै मानिसहरुलाई थाहा हुँदैन । यो रेखा हत्केलामा लामो हुन्छ । यो रेखाबाट मानिसको रचनात्मक व्यवहार थाहा हुन्छ । साथै आत्मविश्वासी र योग्यताको आंकलन गर्न पनि यही रेखाबाट पत्ता लाग्छ । धेरै मानिसमा भने यो रेखा हुँदैन ।
६. छोटो–छोटो तथा पातलो रेखाहरु जसको हातमा धेरै छोटा–छोटा रेखाहरु हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरु निकै संवेदनशील हुन्छन् । साथै सही र गलतबीचको अन्तर छुट्टयाउने क्रममा दुविधामा अल्झिन्छन् ।
७. हातमा निकै कम रेखा हुँदा हत्केलमा निकै कम रेखा हुने मानिसहरु अन्तिम समयसम्म जिद्धी स्वभावका हुन्छन् । यस्ताखालका मानिसहरुसँग कुनै विषयमा कुरा गर्न पनि मुस्किल हुन्छ ।